Uhleli ekhaya umfundi ogwazwe esikoleni i-Smero Secondary | News24
Uhleli ekhaya umfundi ogwazwe esikoleni i-Smero Secondary
INGXABANO esuke phakathi kwabafana abahlala endaweni yaseCaluza naseSigodini abafunda esikoleni samabanga aphakame i-Smero Secondary, igcine ngokuthi kugwaze omunye wabafundi emagcekeni esikoleni.
Lesi sigameko senzeke ngoLwesine olwedlule mhla ziyi-8 kuNdasa (March) nalapho kugwazwe khona uSbusiso Mzwili ofunda u-Grade 11 kusona lesi sikole.
USbusiso waphuthunyiswa esibhedlela i-Edendale nalapho afike alashwa khona wabe esededelwa.
USbusiso ulandise intatheli ye-Echo wathi indaba yaqala ngoLwesithathu ngesikhathi kusuka ingxabano phakathi komngani wakhe nabanye abafana afunda nabo esikoleni abahlala eSigodini.
“Ngisola ukuthi lengxabano yayihleliwe njengoba ngoLwesine laba baseSigodini baphathe imimese ukuze bezohlasela kahle umngani wami.
“Ngesikhathi kuqala uthuthuva ngangihleli kwelinye lamagumbi okufundela ngezwa umsindo ngaphandle ngaphuma ngaya khona ngiyobona ukuthi kwenzakalani. Ngafica iqeqebana labafana baseSigodini beshaya umngani wami ophinde abe umakhelwane wami ngabe sengizama ukulamula. Kwaba sengathi impi iyaphela ngoba baze bangisusa kuyona.
“Ngokuphazima kweso ngabona abanye abafundi abathathu sebephethe imimese beza kumina nokuyilapho ngabona khona ukuthi bafuna ukungigwaza. “Ngazama ukubaleka kodwa ngawiswa umpompi engangingawuboni nokuyilapho bakwazi khona ukungigwaza emhlane,” kuchaza yena.
Ebuzwa ukuthi ngabe unalo yini ulwazi lokuthi kwakubangwani uthe akanaso isiqiniseko kodwa yena wayezama ukusiza umngani wakhe.
I-Echo ithole ngemithombo yayo efunda kusona lesi sikole ukuthi impi yasuswa umakhalekhukhwini nokwakusolwa ukuthi untshontshwe umngani wakhe uSbusiso.
Selokhu kwenzeka lesi sigameko uSbusiso uhleli ekhaya akafundi kanti usephuthwe ukubhala izivivinyo zakhe zesigamu sokuqala sokufunda.
“NgoMsombuluko bekubhalwa IsiZulu kanti ngoLwesibili bekubhalwa iSingisi kodwa angikwazanga ukuyobhala ngoba ngimisiwe esikoleni. Inxeba lona selingcono kodwa into engenza ngingayi esikoleni ingoba kumiswe bonke ababandakanyeka kule mpi njengoba bethi kusaqhubeka uphenyo.
“Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi laba bantu abenza lento ababoshiwe. Kuyimanje mina ngiphuthelwa izifundo zami ngaphezu kwalokho ngisabela impilo yami ukuthi kuzo kwenzakalani uma kungukuthi laba bafana bayaphinda basusa impi uma sengibuyele esikoleni.”
Uphinde waveza ukuthi bekungasikhona okokuqala ebona imimese iphethwe abafundi ngaphakathi esikoleni. “Imimese iyaphathwa vele esikoleni. Angazi ukuthi abafundi bangena kanjani nayo ngoba kunonogada esangweni.” Okhulumela uMnyango wezeMfundo uMnuz Scelo Khuzwayo uthe bengumnyango abahambisani neze nezenzo zodlame ezikoleni.
“Kunophenyo oluqhubekayo mayelana nalolu daba kodwa into esifuna ukuyicacisa nje ukuthi noma ngabe yiziphi izenzo zodlame ezenzeka ezikoleni asihambisani nazo.”
Kushaye isikhathi sokushicilela engakwazanga ukuphendula okhulumela amaphoyisa.